Snus sidoo kale waxay caan ku noqon doontaa wax soo saarka tubaakada aan sigaarka cabbin sannadka 2020. Waa maxay? • Dawooyinka Inc.eu
Snus sidoo kale waxay caan ku noqon doontaa wax soo saarka tubaakada aan sigaarka cabbin sannadka 2020. Waa maxay?
Shayga sheyga wuxuu ka kooban yahay dhul qoyan ilaa semi-qoyan iyo tubaako la kariyey waxaana loo isticmaalaa iyadoo la dhigayo gadaasha bushimaha kore. Nikotiinka ayaa markaa si dabiici ah loogu sii daayaa candhuufta waxaana nuugo xuubka xabka ee afka.
1 Maadooyinka kansarka yar?
2 Suusaanta iswiidhishka
3 Sidoo kale fiiro gaar ah oo loogu talagalay snus-ka siyaasiyiinta, warbaahinta bulshada, saxaafadda iyo sumcado caan ah
Badanaa waxaa lagu heli karaa laba nooc, shaqsi ahaan ama baakadaha qayb ahaan, waxaana laga sameeyaa inta badan la soo xulay inta badan hawo-qallalan iyo qiiqa ka bogsada tobaccos, biyo, cusbo iyo dhadhan dabiici ah.
Daraasad dhowaan ay maalgelisay Machadka Kansarka Qaranka (NCI) ee Ameerika ayaa muujisay taas snus ayaa waxtar u leh sida ciridka nikotiinka ee ka caawinaya dadka caba sigaarka inay joojiyaan sigaar cabista. Xaq u leh, "Tijaabinta tijaabada bukaan-socodka ee daawada loo yaqaan 'snus iyo daawada nikotiinka' ee sigaar cabayaasha xiiseynaya badeecada," daraasadda waxaa sameeyay Dr. Dorothy Hatsukami iyo asxaabteeda ka socota Jaamacadda Minnesota iyo Machadka Cilmi-baarista ee Oregon.
Iyadoo la raacayo natiijooyinkaas iyo caddaymaha ka imanaya Sweden, oo ah waddanka keliya ee EU-da u oggolaanaya isticmaalka snus, hay'adda samafalka caanka ah ee Ingiriiska ee New Nicotine Alliance (NNA) ayaa goor dhaweyd soo saartay war-saxaafadeed ay ugu yeereyso kuwa sharci-dejiyayaasha ah inay hirgeliyaan mamnuucidda wax-soosaarka guud ee EU-da ee isticmaalka snus. sheyga
Arrin xiiso leh, Mareykanka, oo guud ahaan ka dambeeya Boqortooyada Ingiriiska hoos u dhigista waxyeellada markay timaado adhiga, xaaladdan ayaa ah hal talaabo oo hore waxayna u kala saareen snus inay "ku habboon tahay wax soo saarka caafimaadka bulshada".
Waxay si gaar ah caan uga tahay Iswidhan, Danmark iyo Noorway halkaas oo, sidaan kor ku soo sheegnay, ay sharci tahay loona arko wax soo saar yareyn waxyeello leh. Snus, sidoo kale Nicopods Xaqiiqdii, kuma ekaan oo keliya in Iswidhan ay yeelato heerka ugu hooseeya ee sigaar cabista Yurub laakiin, ka sii muhiimsan, heerarka ugu hooseeya kansarka sanbabada ee qaaradda oo dhan.
Maadooyinka kansarka yar?
Sababta oo ah waxaa horay loogu daaweeyay geeddi-socod aad ugu dhow uuminta uumiga, heerarka TSNAs (Tubaakada Gaarka ah ee Nitrosamines - oo ah mid kamid ah kooxaha ugu waaweyn ee kansarka kujira waxyaabaha tubaakada lagu sameeyo) ayaa si aad ah looyareeyay iyadoo lakafeynayo sheyga oo lagana caawinayo inay ahaato mid cusub .
Sababtoo ah waxay ka kooban tahay qadar aad uga hooseeya TSNAs marka loo eego inta badan waxyaabaha kale ee tubaakada laga sameeyo, cilmi-baaristii ugu dambeysay ee sayniska waxay muujineysaa inaysan jirin wax caddeyn ah in isticmaalka snus uu yahay cunsur sababi kara. Kuma xirna xaaladaha caafimaad ee sida caadiga ah la xiriira isticmaalka tubaakada caadiga ah, sida kansarka, cudurada wadnaha, istaroogga, ama sonkorowga, iyo kuwo kale. Waa isticmaalka snus sigaar cabista cusub?
Iswidhan gudaheeda waxa la yidhaa daraasad ayaa muujisay in helitaanka snus uu runtii saamayn togan ku yeeshay caafimaadka bulshada tusaale ahaan, wadamada Scandinavian-ka sida Sweden. Xaqiiqdii, tirakoobku wuxuu muujinayaa inuu yahay kaalmada joojinta sigaarka ee ugu caansan Sweden iyo Norway, maadaama ay waxtar weyn u leedahay ka caawinta dadka inay joojiyaan sigaar cabista.
Waxyaabo yar oo kansarka jirka ka mid ah, dhimasho uma dhinto snus gudaha Iswiidhan (ilaha)
Maaddaama inta badan dadka tubaakada halkaas ku nool ay hadda doorbidaan tubaakada sigaarka, Sweden waxay leedahay heerka ugu hooseeya ee dhimashada iyo dhimashada kansarka sanbabada ee waddan kasta oo Yurub ah, sida laga soo xigtay Hay'adda Caalamiga ah ee Cilmi-baarista Kansarka (IARC) iyo Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. tirakoobka.
Snus-ka iswiidhishka ayaa siyaabo badan uga duwan wax kasta oo dunida tubaakada ka jira. Soosaaristeedu waxay raacdaa nidaamyo adag iyo heerarka nadaafadda maadaama ay nidaamineyso inay tahay cunno ay soo saartay Maamulka Cunnada iyo Dawooyinka ee Iswidishka.
Waa in aan lagu qaldin waxyaabaha la midka ah laakiin waxyeellada badan leh, sida Tubaakada 'Diidmada Ameerikaanka', oo isbarbardhiggeedu yahay khamiir, Tubaakada la ruugo, Sigaar lagu cabo, ama noocyo kala duwan oo tobaakooyinka afka laga qaato ah, sida kuwa loo isticmaalo Ameerika, Waqooyiga Afrika iyo waddamada Aasiya qaarkood.
Isutagga kaliya ee Iswiidhishka Snus leh alaabooyinka noocaas ah ayaa saameyn taban ku yeeshay Iswiidhishka Snus, maadaama ay horseedday fikrado been abuur ah, in kasta oo caddeyn aan ku filnayn.
Sidoo kale fiiro gaar ah oo loogu talagalay snus-ka siyaasiyiinta, warbaahinta bulshada, saxaafadda iyo sumcado caan ah
Si kastaba ha noqotee, adduunku wuu furmayaa. Aqoonsiga sii kordhaya ee iswidhishka ee beddelka isticmaalka tubaakada caadiga ah wuxuu dhaliyay xiise dhab ah dalal badan. Iswiidhishka Snus wuxuu hadda helaa xulafo cusub iyo ilo saameyn ku leh, ha ahaato dhinacyada siyaasadeed iyo kuwa caanka ah. Codad madax-bannaan ayaa ka dhawaaqaya taageerada Snus Swedish, labadaba warbaahinta bulshada iyo saxaafadda caalamiga ah ee caadiga ah.
Tilmaam xoogan oo ku saabsan kartida adduunka ayaa ah maal-gashigyadii ugu dambeeyay, iskaashatooyinka wadajirka ah iyo iskaashiga u dhexeeya soosaarayaasha Swedish Snus iyo shirkadaha caalamiga ah ee tubaakada, sida Philip Morris International, oo hadda u ololeynaya Swedish Snus suuqyada caalamiga ah ee la bartilmaameedsaday iyagoo wata magacyadooda ugu sarreeya Marlboro, Chesterfield iyo Parliment. ee iibkooda iyo kanaalada qaybinta.
Istaraatiijiyado isku mid ah waxaa adeegsada British American Tobacco Group iyo Japan Tobacco Incorporated. Sidoo kale waa xaqiiqo caan ah oo ka dhexjirta warshadaha Iswiidhishka ee Snus in hoggaamiyeyaasha suuqyadu ay sameynayaan maalgashi iyagoo ujeeddadoodu tahay in la sii wado bartilmaameedka rajada xiisaha leh ee suuqa Aasiya.
Ilaha waxaa ka mid ah Goteborgssnusfabrik (EN), SwedishMatch (EN), Vapingpost (EN)
AmericaEuropacaafimaadkasharci-dejintacilmi baarissaxanBoqortooyada IngiriiskaMaraykankaAdduunka oo dhansharciga
Xalka tijaabada: toban haramaha
Berri waa maalin. Ku dhawaaqida rasmiga ah ee dawladaha hoose ee ka qaybqaadan doona tijaabada haramaha ...
Marijuana ma caawin kartaa daaweynta dhaawacyada madaxa (CTE)?
Cudurka maskaxda ee 'traumatic encephalopathy' (CTE) waa xaalad neurodegenerative ah oo ku dhacda dadka qaba dhaawacyo badan oo madaxa ah ...